Tenga Multi-Pocket Ribhoni Cargo Pants For Men | WoopShop®
Cherechedza: Uku ndiko kukura kweChinese, kazhinji 2-3 saizi idiki pane EU/US saizi. Kana iwe ukapfeka EU/US saizi L, unogona kusarudza saizi yedu XXL kana XXXL. Sekuyerwa neruoko, mutsauko we1-3cm unobvumidzwa (1cm=0.39inch). Makomputa akasiyana anogona kuratidza mavara akasiyana kunyangwe ari iwo mavara akafanana. Ndapota bvumira kusiyana kwemavara kunonzwisisika.
Mabhurugwa acho aive akakwana uye size hombe
2nd nguva kutenga zvechokwadi inokurudzira kunaka kwakanaka
Am Brasil nemabhurugwa anouya ese mukati mekuenderana uye saizi TBM. Wakasvika zuva rakatarwa risati rasvika ótimoooo